“Waan Ogahay inaad sugeysaan wax ku saabsan Mourinho…..!!”.- Pogba oo markii ugu horreysay ka hadlay Ceyrinta Jose Mourinho – Gool FM
“Waan Ogahay inaad sugeysaan wax ku saabsan Mourinho…..!!”.- Pogba oo markii ugu horreysay ka hadlay Ceyrinta Jose Mourinho
(Manchester) 23 Dis 2018. Manchester United ayaa gaartay guul wayn oo ay ugu dambeysay berigii Sir Alex Ferguson kulankoodii ugu horreeyay ee Tababaraha ku meel gaarka Solskjaer kaddib markii ay 5-1 uga adkaadeen Cardiff.
Pogba ayaa dhiibay oo caawiyay labo ka mid ah goolasha, wuxuuna wareysi uu bixiyay ciyaarta kaddib ku qiray inuu u mahad celinayo Jose Mourinho oo ku sheegay inuu hormariyay ciyaaryahan ahaan iyo shaqsi ahaanba.
“Waan ogahay inaad sugeysaan wax ku saabsan Mourinho, ama wax ku saabsan natiijada ciyaarta”, Pogba ayaa sidaa yiri.
“Sida muuqata, waan ku faraxsanahay natiijada. Si fiican ayaan u ciyaarnay. Bandhiga kooxda mid wayn ayuu ahaa. Waana ogahaya waxa aad dooneysaan inaad i waydiisaan.
“Jose waxaan kula guuleysanay koobab. Waan la shaqeynay. Waxaan doonayaa inaan midaa uga mahad noqo.
“Ma ahan inay wax kasta si fiican ku socdeen, laakiin waxyaabaha si fiican ayay ku socdeen. Koobab ayaan ku guuleysanay. Wuu i hormariyay laacib ahaan iyo shaqsi ahaanba.
“Iminka waxaan eeganeynaa kulanka xiga, dhibcaha aan dooneyno. Waxaan dooneynaa inaan dib ugu soo laabano halka sare ee horyaalka.”.
Giorgio Chiellini oo digniin culus u diray kooxdiisa Juventus, kadib guushii silica ahayd ay ka gaareen Roma